ngwugwu batrị lithium ion
Igwe ọkụ batrị
Ngwa batrị batrị
Ụdị batrị cylindrical
Ụdị batrị Prismatic
Vietnam VinFast na-ewu ụlọ ọrụ batrị 5GWh
Vietnam VinFast na-ewu ụlọ ọrụ batrị 5GWh Vietnam Vingroup kwupụtara na ọ ga-ewu ụlọ ọrụ batrị 5GWh maka akara ụgbọ ala eletrik VinFast na Ha Tinh Province, yana ntinye ego nke US $ 387 nde. Igwe ọkụ zuru ụwa ọnụ na-ekpo ọkụ, na OEM na-eme ngwa ngwa ha ...
1300MWh! HUAWEI bịanyere aka na ọrụ nchekwa nchekwa ike kacha ukwuu n'ụwa
1300MWh! Huawei bịanyere aka na ọrụ nchekwa nchekwa ike kachasị n'ụwa Huawei Digital Energy na Shandong Power Construction Company III bịanyere aka na ya nke ọma na Saudi Red Sea New City ọrụ nchekwa nchekwa ike. Ọnụ ọgụgụ nchekwa ike nke ọrụ a bụ 1300MWh. Ọ bụ ike kacha n'ụwa...
Ụlọ ọrụ batrị cylindrical na-eji "mkpa" ebili
Companieslọ ọrụ batrị cylindrical na-eji “mkpa” bilie Nchịkọta: Nyocha GGII kwenyere na ụlọ ọrụ batrị lithium nke China na-eme ngwa ngwa ntinye nke ahịa ngwá ọrụ ike mba ụwa. A na-eme atụmatụ na n'afọ 2025, mbupu ngwá ọrụ ọkụ China ga-eru 15 ...
Ụlọ ọrụ batrị LFP mbụ nke Europe rutere na ike nke 16GWh
Ụlọ ọrụ batrị LFP mbụ nke Europe rutere na ikike nke 16GWh Nchịkọta: ElevenEs na-ezube iwu ụlọ ọrụ batrị LFP mbụ na Europe. Site na 2023, a na-atụ anya na ụlọ ọrụ ahụ ga-enwe ike ịmepụta batrị LFP nwere ikike kwa afọ nke 300MWh. N'agba nke abụọ, mmepụta ya kwa afọ ...
Nyocha ahịa nke ụlọ ọrụ batrị lithium ngwá ọrụ ike
Nyocha ahịa nke ụlọ ọrụ batrị lithium ngwá ọrụ ike Batrị lithium a na-eji na ngwaọrụ ike bụ batrị lithium cylindrical. A na-ejikarị batrị maka ngwaọrụ ike maka batrị dị elu. Dị ka ihe ngosi ngwa si dị, ikike batrị na-ekpuchi 1Ah-4Ah, nke 1Ah-3Ah bụ mainl ...
Batrị lithium gbawara na mberede? Ọkachamara: Ọ dị oke egwu iji chaja batrị lead-acid chaji batrị lithium
Batrị lithium gbawara na mberede? Ọkachamara: Ọ dị oke egwu ịgbanye batrị lithium na batrị lead-acid Dị ka data ndị ngalaba dị mkpa wepụtara si kwuo, ọkụ ụgbọ ala eletrik karịrị puku abụọ na-agba n'ofe obodo kwa afọ, na ọdịda batrị lithium bụ isi ca...
LG New Energy nwetara onye nrụpụta ike nchekwa NEC ES
LG New Energy na-enweta ndị nrụpụta ike nchekwa NEC ES Dị ka nyocha ụlọ ọrụ si kwuo, nnweta a na-enye LG New Energy ohere maka njikọta kwụ ọtọ na ụlọ ọrụ nchekwa ike, na-eme ka ọ bụrụ onye na-eweta usoro nchekwa nchekwa ike batrị otu nkwụsị, na-enye ọrụ f.. .
N'ime ọnwa asaa mbụ, China rụpụtara batrị lithium-ion ijeri 12.65 na igwe eletriki nde 20,538.
N'ime ọnwa asaa mbụ, China rụpụtara batrị lithium-ion ijeri 12.65 na igwe eletriki eletrik nde 20,538 Site na Jenụwarị ruo July, n'etiti ngwaahịa kachasị nke ụlọ ọrụ nrụpụta batrị nke mba, nrụpụta nke batrị lithium-ion bụ ijeri 12.65, otu afọ gara aga. - mmụba afọ nke 41.3%; ...
Ọdịiche dị n'etiti nickel-metal hydride, batrị nickel-cadmium na batrị lithium.
Ọdịiche dị n'etiti nickel-metal hydride, batrị nickel-cadmium na batrị lithium batrị NiMH batrị nickel-metal hydride bụ nke ion hydrogen na nickel dara. Ha nwere ikike nchekwa 30% karịa batrị nickel-cadmium, dị ọkụ karịa batrị nickel-cadmium, yana h ...
Kedu otu esi azụta ụlọ akụ ike ekwentị, nke ka mma?
Kedu otu esi azụta ụlọ akụ ike ekwentị, nke ka mma? Kedu otu esi azụta ụlọ akụ ekwentị mkpanaaka, nke ka mma? Maka ndị ọrụ ekwentị smart na-aghọtaghị ike mkpanaka na mbido, ị ga-abụ ezigbo nna ukwu nke ịzụrụ ike ekwentị. Nzọụkwụ/Ụzọ 1. Gịnị bụ ụlọ akụ ọkụ? Kedu ihe bụ elektrọn mkpanaka...
Ihe kpatara nyocha na azịza maka nsogbu nkịtị nke batrị lithium ion batrị
Ihe kpatara nyocha na ihe ngwọta maka nsogbu nkịtị nke lithium ion batrị Site na mmepe ngwa ngwa nke sayensị na nkà na ụzụ, oke na ọrụ batrị lithium adịla anya nke onwe ya, mana na ndụ anyị kwa ụbọchị, ihe mberede batrị lithium na-apụta mgbe niile na-adịghị agwụ agwụ, nke na-abụkarị mgbe niile. na-ata anyị ahụhụ. ...
Ire LG New Energy na nkeji nke abụọ bụ ijeri US $ 4.58, na Hyundai na-ezube itinye ego na njikọ aka $ 1.1 ijeri US na Hyundai iji wuo ụlọ ọrụ batrị na Indonesia.
Ire LG New Energy na nkeji nke abụọ bụ ijeri US $ 4.58, na Hyundai na-ezube itinye ego na njikọta ijeri US $ 1.1 na Hyundai iji wuo ụlọ ọrụ batrị na Indonesia. Ire LG New Energy na nkeji nke abụọ bụ ijeri US $ 4.58 yana uru ọrụ bụ nde US $ 730. LG Che...
Ala 5, ụlọ 6, Dongfanghong Industrial Park, Yushi Road, guanlan, Long Hua, 518109 Shenzhen China